Browsing: » Home »ကျန်းမာရေး»ရှောင်စေချင်သည် တညင်းသီး(အဆိပ်သီး)	Leaveacomment
ရှောင်စေချင်သည် တညင်းသီး(အဆိပ်သီး)	Posted by danyawadi on July 25, 2016 in ကျန်းမာရေး	အဆိပ်တွေနဲ့ အသီးအားလုံး သိကြတဲ့ အသီးပါပဲ။ ကြိုက်တဲ. လူလည်း တော်တော်များမယ် ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင်. အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ တညင်းသီးပါ။
← တရုတ်နိုင်ငံတွင်​ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်​ လူ​သေ​ပျောက်​	ဂျက်လေယာဉ် ပိုင်သည့် ထိုင်းပြည်ပြေး ဘုန်းကြီးကို အမေရိကန် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖမ်းဆီး →